Mayelana NATHI - Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.
Baoding Lida Plastic Imboni Co., Ltd.
ISIQINISEKISO SOMHLABA WONKE
Izinga lemikhiqizo nezinsizakalo zethu lilinganiswa ngesisekelo samazinga nemihlahlandlela kazwelonke neyamazwe omhlaba. Ngaphandle kokwenza ukuhlolwa okuphelele ngaphakathi, sithole izitifiketi eziningi zangaphandle, isib. sithathe i-ISO9001 International Quality Management Accredication yekhwalithi ngokungathi sína. Futhi ngo-2003 yazuza isitifiketi se-High-tech Enterprise, yabe isidlulisa isitifiketi sokukhululwa komkhiqizo ekuhlolweni kwekhwalithi yokuqapha ngo-2007. Sathola isitifiketi se-ISO14001 sokuphathwa kwemvelo ngo-2008.
Sisungule inetha lokuthengisa emhlabeni wonke, elisekelwa ngamakhasimende aphakade futhi nokuthuthuka okuqhubekayo kwemikhiqizo nezinqubo. Kuze kube manje imikhiqizo ithunyelwe emazweni angaphezu kwama-30, njengeMelika, iNgilandi, iCanada, i-Australia, iSingapore, iMalaysia, iThailand njalonjalo. Siphumelele ukulinganisa okuhle kuwo wonke amaklayenti ethu ngemikhiqizo yokusebenza ephezulu, amanani entengo kanye nensizakalo yokwazisa.
NGEMVA KOKUTHENGISWA KWENKONZO
I-Baoding Imboni yeLida Plastic Co., LTD., njalo thatha insizakalo "yamahora angama-24, insizakalo esezingeni eliphakeme, insizakalo yenqubo ephelele, insizakalo yokuphila konke" njengenhloso yethu yesevisi, futhi "kumele sebenzisa ikhasimendes'funa, thola i amakhasimendeukuzethemba ngabo ukwaneliseka "njengomqondo wethu wenkonzo, unamathela kuzinga elilwela ukusinda, ekusebenzeni kahle nasekuthuthukisweni, insizakalo yedumela. Thinaukuqinisekisa umkhiqizo ikhwalithi esikhathini sewaranti, uma imikhiqizo unayo inkinga yekhwalithi, sizokwenza kanjalo ukulungisa, ukufaka esikhundleni noma ukubuyisa emuva ngokungenamibandela.
I-Baoding Lida Plastic Industry Co., Ltd. izibophezele ekuhlinzekeni okungaphezulu nje kwemikhiqizo esezingeni kumakhasimende ethu, kanye nokunikeza uhla lwezinsizakalo ezenezelwe kubandakanya ukusekelwa kwezobuchwepheshe nokuphendula ngesikhathi esifanele kuzidingo zamakhasimende ethu zansuku zonke. Sisebenzisana nawe nsuku zonke ukuze singagcini ngokufeza okulindelwe okuphezulu, kepha ukukusiza ukuthi usebenzise imakethe entsha ngokuqhubekayo.Sicela uxhumane nathi ukuze ufunde kabanzi ngeBaoding Lida Plastic Industry Co., Ltd.